Odokotela abasebenzela ukufinyeleleka kwezempilo elokishini: Dkt Siphesihle Dlamini nomlingani wakhe uDkt Langelihle Ngubane.
Odokotela Abasebasha Bavulela Amathuba Okufinyelela Kwezempilo Emlazi
Odokotela abaningi abasebasha bakhetha ukuqala izindawo zabo zokusebenzela ezindaweni ezisemadolobheni eziphithizelayo nasenxanxatheleni yezitolo kodwa lokhu akubanga yindlela oDkt Siphesihle Dlamini (27) nabambisene naye ebhizinisini uDkt Langelihle Ngubane (37).
Labo dokotela abasebasha basanda kuvula indawo yabo yokusebenzela elokishini laseMlazi, eNingizimu neTheku.
Emva kokuphothula iziqu zabo ze-MBChB eSikoleni iSezifundo KwezokweLapha i-Nelson R Mandela e-UKZN futhi bebe bekhulele khona eMlazi besayizingane, bekuyiphupho labo ukubuyela kulo mphakathi bezokwenza ngcono isimo sokuhlinzekwa kwezokwelapha.
‘Ukulahlekelwa umama wami ngisafunda ibanga likamatikuletsheni nokushiywa ubaba wami sengisenyakeni wokugcina enyuvesi kwangigqugquzela ukuthi ngiguqule zonke izimo ezimbi zibe ngezinhle,’ kusho uDlamini.
Wazalelwa kwaMashu wabuye wayohlala eMlazi, uDlamini waqeda umatikuletsheni wakhe eSibonelo High School KwaMashu waphothula iziqu zakhe ze-MBChB ngonyaka wezi-2013. Manje umatasa nezifundo zeDiploma kwezempilo nokuphepha emsebenzini.
‘Ngenkathi ngiqedelela uhlelo lokusebenzela umphakathi esibhedlela i-Prince Mshiyeni, uNgubane wasevele ekade aba udokotela onozinzo. Wangiqeqesha kwaze kwaba ukuthi siba osomabhizinisi ababambisene futhi saba abangani. Okubalulekile kakhulu ukuthi sinamaphupho nemibono efanayo, okungakho ke sifuna ukwenza umsebenzi omningi wokulekelela umphakathi ukuze ezempilo zitholakale kalula emiphakathini yethu.’
UNgubane, owaphothula iziqu zakhe ze-MBChB ngonyaka wezi-2003, wazalelwa eNquthu eNyakatho ne-KwaZulu-Natali. Ingxenye yokukhula kwakhe yaba semadolobheni asemaphandleni aseShowe nakwaNongoma lapho uyise, owayewumfundisi, wayenza khona umsebenzi wakhe wesonto. Kungalesi sikhathi ke lapho uNgubane wabona khona ukuthi abantu basezindaweni zasemaphandleni babekuhluphekela kanjani ukuthola usizo lokwelashwa. Wabona ukuthi abantu basemiphakathini yasemaphandleni babe hamba amabanga amade beya emadolobheni ukuze bathole usizo lwezempilo.
‘Indawo yethu yokusebenzela esesigcemeni sakwa-P, kuMayibuye Drive phakathi elokishini laseMlazi iyindawo eyisizinda esisodwa sakho konke lapho silekelela ngosizo kwezezifo eziphuthumayo neziwundendende, ukuhlonzwa kwezifo, ukwelashwa nokudluliselwa kongoti, ukuxilongwa kwabesifazane, ukusokwa, ulwazi lwezempilo nokwelulekwa, ukuhlolwa, ukunakekelwa kwezinsana nokuhlelwa kwemindeni okuyizinto ezidingwa kakhulu yimiphakathi yethu,’ kusho uDlamini.
KuNgubane ukuvula indawo yokusebenzela eMlazi kuwukufezeka kwephupho ngoba naye wayesehlale eMlazi iminyaka embalwa. UNgubane ubuye abe obhekene nezokwelashwa emsebenzini kwenye yezinkampani eziseThekwini.
‘Ngisakhula ngangikholwa ukuthi ngizoba unjiniyela wengqalasizinda, manje angiboni ukuthi ngangizomelana nalo mkhakha – senginothando olukhulu lwezokwelapha. Lo msebenzi ukunikeza ukugculiseka ngokuqhubeka wakha ubudlelwano obuhle neziguli zakho, lapha awulaphi nje izifo zomzimba kodwa ugcina sewunika nezeluleko nokunakekela ngokwenhlalo nengqondo yeziguli njengoba besuke bekutshela ngezinkinga nexhala lazo nsuku zonke enibonana ngazo. Iziguli ziyasithemba futhi lokhu kunikeza umuzwa wokugculiseka,’ kubeka uNgubane.
Ohlelweni lwabo olumatasa lokukhangisa ngendawo yabo yokusebenzela entsha eMlazi, ukufunda, nokubhekana namabhizinisi aseceleni, laba ababili babuye benze umsebenzi wokwelapha nase- Pinetown.
‘INyuvesi YaKwaZulu-Natali ayigcinanga nje ngokusiqeqesha ukuthi sibe odokotela abafanele kodwa yabiye yasihlinzeka ngamakhono obuholi, yasinika nendawo yokuthi sakhe ubuhlobo nobudlelwano njengabasebenzi bezokwelapha.’
Amagama: nguLihle Sosibo
Lube Yimpumelelo Usuku Lwabazali e-UKZN
KZN Produces the First Nuclear Physician
African Centre for Crop Improvement Launches Book Celebrating 15 Year Milestone
College of Humanities Appoints Deans
Honour Bestowed on Molefe - UKZN’s Most Inspiring – Top 40
Life Sciences Research Benefits from Ford Wildlife Foundation Research Vehicle
Drama and Performance Studies hosts Swiss Choreographer for Dance, Diversity and Disability
Seminar on Nelson Mandela –Fidel Castro Collaboration Program (NMFCCP)
SMIG Collaborates with German University to Enhance Responsible Creative Innovation and Technology Management
Student Motivates Youth to Think Hard about Life After Matric
Enactus UKZN Hosts an Innovation Challenge